बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: 2010-02-28
रुसि सांस्कृतिक केन्द्रमा भइरहेको साताव्यापि बालनाटक महोत्सब, बालनाटकको रमाइलो मेला २०६६ को पाँचौ दिन आज कार्तिकेय घिमिरे लिखित बालनाटक पाँच रुपियाँको मन्चन भएको छ । बिहान १२ बजे र तीन बजे गरी जम्मा दुइ शो देखाइएको यो नाटकको निर्देशन प्रेम पौडेल र मानस राजले गरेका हुन् । यो नाटकको मुख्य पात्र आशा एघार वर्षीय बालिका आयुषी सामरी हुन् । उनी आलोक विद्याश्रममा पढ्छिन् । उनले यस नाटकमा एउटी दयालु बालिकाको चरित्रमा जोडदार र जीवन्त अभिनय गरेकी छिन् । त्यस्तै यस नाटकलाई मनछुने बनाउँने काम जुम्सीको अभिनयले गरेको छ । त्यो भूमिकामा दश वर्षीय बालिका पूजा अधिकारीले अभिनय गरेकी छिन् । उनी श्री बालव्यवसायी मावि सिफलमा पढि्छन् । यो नाटक शैली थिएटरको प्रस्तुतिमा मन्चन भएको हो ।
हाम्रो देश विविधताको देश हो । यहाँ धनी गरिब सबै खालका बालबालिकाहरु छन् । जापानदेखि आएर जापानका बालबालिकाहरुले नेपालका गरिब बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्छन् । तर नेपालकै सक्षम धनी बुवाआमाका छोराछोरी बालबालिकाले गरिब नेपाली बालबालिकालाई सहयोग गर्दैनन् किन ? किन धनी परिवारका आमाबुवाहरुले गरिब बालबालिका प्रति मानवीय सेवा गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई प्रेरित गर्दैनन् ? यहाँ एकथरी बालबालिकाहरु जाडोमा लुगा लाउँन नपाएर मरिरहेका छन् र अर्कोथरि बालबालिकाहरु भने लुगा धेरै भएर स्टोर कोठामा राखेर सढाइरहेका छन् । किन उनीहरुको मनमा असहायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउँन धनी आमाबुवाहरुले प्रयास गरिरहेका छैनन् ? किन उनीहरु गरिब बालबालिकामाथि बालश्रमिकका नाममा पशु सरहको व्यवहार गर्छन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु बोकेर नाटककी मुख्य पात्र आशा यो नाटकमा एउटी विद्रोही मानवतावादी चरित्रको रुपमा उभिएकी छिन् । उनी आफ्नै घरभित्र आफ्नी आमासँग संघर्ष गरेर सबै बालबालिकाहरु असहाय साथीहरुलाई हामी सहारा भएका सक्ने साथीहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आव्हान गर्न चाहन्छिन् । त्यसैले उनी हरेक शहरी भेगका धनीमानी बालबालिकालाई के आब्हान गर्छिन् भने आउँनुस्, हामीले आफ्नो खाजा खर्चबाट हरेक दिन पाँच रुपियाँ जोगाएर हिमालकी पेमा दिदीलाई, तराइकी धनिया बहिनीलाई र जुम्सी जस्ता स्कुल जान नपाएका साथीहरुलाई सहयोग गरौं ।
चुस्त निर्देशन र कलाकारहरुको मन छुने अभिनयले यो नाटक उत्कृष्ट भएको छ । सुरुमा हँसाउँने र बिस्तारै दर्शकलाई गम्भीर बनाउँदै लगेर वियोगान्त अन्त्य भएको यो नाटकमा निर्देशकद्घय प्रेम पौडेल र मानसराजको काम तारिफयोग्य रहेको छ । एक महिना लामो अभ्यास पछि विशेष च्यारिटी शोका लागि तयार गरिएको यो नाटक देशका प्रमुख शहरी भेगमा पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न बालबालिकाबीच मानवीय संवेदना जगाउँने र झकझक्याउने उद्देश्यसहित मन्चन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यस नाटकको निर्देशनमा शैली थिएटरका अध्यक्ष नवराज बूढाथोकीले विशेष सहयोग गरेका छन् ।